Let It Be: စုဆောင်းမိသမျှသတင်း
ပြည်သူများ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြခဲ့မှုများ နောက်ပိုင်း အခြေခံ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက် တက်မှုများ ရှိသလို ကျဆင်း သွားမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
အင်တာနက် ပြန်လာပါပြီ၊ သို့သော် ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း ပေါ်တလှည့် ပျောက်တလှည့် ဖြစ်ရခြင်းသည် ဆာဗာ ပျက်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ တယ်လီပို့ထ်ဌာနကဆို လတ်တလောတွင် အင်တာနက် ကဖေးများ၌ တနာရီကို ၅ဝဝ ကျပ်ဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ပြီး၊ ည ၉ နာရီ နောက်ပိုင်း ကျပ်ငွေ ၃ဝဝ ဈေးလျှော့ချပေးမှုများ ဖြစ်ထွန်းနေ
နအဖ စစ်အစိုးရမှ ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည့် ကေအိုင်အို၏ လက်အောက်ခံ စစ်တပ် ကချင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) ခြေလှမ်းပြင်နေ
မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်း ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် အဖမ်းခံထားရသည့် မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၃ဝ ကျော်သွားပြီ ဖြစ် (တိုင်းစည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး၊ မြို့နယ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင် ၂၅ ဦး) သူတို့အထဲတွင် အမျိုးသမီး ၅ ဦး ပါဝင်သည်ဟု မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။နောက်ဆုံး အဖမ်းခံရသူမှာ အန်အယ်ဒီ တိုင်းအတွင်းရေးမှူး ဦးကံထွန်း
စစ်အစိုးရ စစ်သားများက သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် မဂ္ဂင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တနင်္လာနေ့ညက စတုတ္ထအကြိမ် ၀င်ရောက် စီးနင်းရှာဖွေရာတွင် စစ်သားများက ကွန်ပျူတာ တလုံးနှင့် ငွေသား ကျပ် ငွေ ၃၆၀၀၀၀ ကို သိမ်းယူသွားသည်ဟု ၎င်း ကျောင်းတွင် တည်းခိုခဲ့သည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်တဦးက ပြော
ဖမ်းဆီးခံ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရန် စစ်အစိုးရက အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ကြည်ကို ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း စစ်အစိုးရ ရုပ်သံနှင့် ရေဒီယိုက ယနေ့ည ကြေညာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်၏ တာဝန်ကို ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ (Manager fro relations) ဟု သုံးနှုန်းထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့က နအဖစစ်တပ်မှ ပစ်သတ်လို့ သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းထောက် နာဂါအိခန်းဂျိရဲ့ဈာပနကို ယမန်နေ့က မိနာမိ အအိုးယာမ မှာ တခမ်းတနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဂျပန်ရှိ မြန်မာသံရုံးရုံးရှေ့မှာတော့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြသလို အဲဒီ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတွေကို ဂျပန် ဘုန်း တော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များအပါအ၀င် ဂျပန်ပြည်သူတွေကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆန္ဒပြလျက်ရှိပြီး မြန်မာသံရုံးကို ဂျပန်မြေကနေ ထွက်သွားဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့လည်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အောက်တိုဘာ (၁၂) ရက်မှစတင်ကာ (၃) ရက်တိတိ နေ့လည် (၁၂) နာရီအချိန်တွင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကို ပြသရန် မိမိတို့၏နေအိမ်များတွင် (၁၂) မိနစ်တိတိနေပေးကြပါရန် စာပေ၊ ဂီတအနုပညာရှင်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်လူငယ်များနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များပါဝင်သည့် Generation Wave ခေါ် အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု လူငယ် အင်အားစု (မြန်မာနိုင်ငံ) က ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်ရိုက်နှက် ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူ အာဇာနည်များ၊ စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင် ရိုက်နှက်ညှင်းပမ်းမှုများကြောင့် သေဆုံးသွားကြရသူ များအတွက် ရည်စူး၍ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်ရန် ပန်ကြားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါရှိ
ယနေ့နံနက်က စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေပုံပါသည့် မိုးပျံပူဖောင်းများကို သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်း လူငယ်တစုက လွှတ်တင်ခဲ့ရာ လူအများအပြား အုံဖွဲ့ကြည့်ရှုခဲ့ကြ သည်။“(၈) နာရီ (၄၅) ငါးမိနစ်လောက်က စံပြဈေးရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတာ၊ ထိပ်ပိုင်းမှာ လူသတ်ကောင် လို့ ရေးထားတယ်၊ သန်းရွှေဓါတ်ပုံပေါ်မှာ နာဇီတံဆိပ်စင်္ကြာပုံ ကပ်ထားတယ်၊ ထူးခြားတာက အနီးကလူတွေ ရှောင်မသွားပဲကို ၀ိုင်းအုံပြီး ကြည့်ခဲ့ကြတာ”ဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောသည်။ ပူဖောင်းနှစ်လုံးတွင် တပုံကျ ချိတ်ဆွဲကာ အလုံးပေါင်း ၁၂၀ ဖြင့် ပုံ ၆၀ အား ချိတ်ဆွဲလွှတ်တင် လိုက်သဖြင့် အာဏာပိုင်များ၏ လိုက်လံဖျက်ဆီး၍ မရနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှာလည်း စိတ်ဝင် စားဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
တရုတ်ဦးဆောင်၍ ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာ့အရေး ပျော့ပြောင်းညင်သာစေရန်ကြိုးပမ်း . . . တရုတ်နိုင်ငံက ဦးဆောင်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အနောက်နိုင်ငံများမှ ကမကထလုပ် အဆိုပြုထားသော မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်နေမှုများကို အပြစ်ပေးအရေးယူရန် အဆိုပြုချက်ကို ယမန်နေ့က ၃ နာရီကြာ ကျင်းပခဲ့သည်။
တာမွေကျောင်းရှေ့တွင် ပြည်သူ ၇ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့. . . ပြီးခဲ့သည်လ (၂၇) ရက်နေ့က တာမွေ အ.ထ.က (၃) ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသူများအား စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့ရာ ပြည်သူ ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါကျောင်းရှေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ သူတဦးက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “တပ်မ (၂၂) နဲ့ ရဲတွေက ပစ်တာ၊ ၇ ယောက်ကျော်လောက် သေမယ်၊ ဒဏ်ရာရတဲ့ လူတွေက တော့ အများကြီးပဲ၊ အရိုက်ခံရတဲ့လူတွေဆီက ငွေတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ ဖုန်းတွေ အကုန်လုံးကို လုယူတာ”ဟု ဖမ်းဆီးခံရသူတဦးက ဆိုသည်။
တောင်ကုတ်မြို့တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသူမိသားစုနှင့်တွေ့ခွင့်မရ. . . ကိုစိုးဝင်းသည် ဆားစင်ကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီး ပခုက္ကူသံဃာတော်များအား စစ်အစိုးရစစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့ သဃာများမကျေမနပ်ဖြစ်နေချိန် ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ရန် တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့သူဖြစ်သည်